Boligaria : niteraka savorovoro politika ny fahitana ny sisan-taolan’i Masindahy Joany Batista · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Aogositra 2010 20:52 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, srpski, English
Tao amin'ny fandaharana iray momba an'i Joany Batista tao amin'ny fahitalavitra Boligara.
Ny 1 aogositra dia nanambara ny gazety sy ny fahitalavitra boligara fa nisy hita tany akaikin'ny tanàna amorontsirak'i Sozopol ny sisan-taolan'i Joany Batista. Tsy nahagaga raha niteraka resabe teo amin'ny boligara ity zavatra hitan'ny mpikaroka [arkeology] Kazimir Popkonstantinov ity.
Andro vitsivitsy taty aorian'ny nahitana azy sy ny nanambarana fa tena ny sisan'ny masindahy ilay izy, dia maro no nikiaka, fa ny tena marina, dia lainga izany. Bojidar Dimitrov, minisitra tsy manana ministera, ary hatramin'ny vao haingana, dia talen'ny Tranom-bakoka mitahiry ny tantara tao Sofia, no nomba ity zavatra vao hita ity. Na izany aza, niteraka fanehoan-kevitra henjakenjana ny teny nampiasainy nanoloana ny hevitry ny boligara. Nolazainy fa “mivaha” ny fiaraha-monina boligara noho ny tsy finoan'izy ireo tsy hahalalana ny sisan-taolan'ny masindahy Joany Batista. Namaly bontana izany fiteny mahery nataony izany ireo mpitarika ny mpanohitra ka mitaky ny fialan'i Dimitrov. Ireo solontenan'ny tanora sosialista boligara dia namorona vohikala azprotestiram.com natao hanoherana amin'ny aterineto sy hanaovana antso hanalana an'i Dimitrov.
Namoaka hevitra marobe ireo bilaogy boligara manoloana izany rehetra izany, fa amin'ny ankapobeny dia manameloka ny tenin'ny ministra izy ireny.
Boiana MG manoratra [BG]:
Faran'ny volana jolay tamin'ity taona ity, nahitana zava-baovao manan-tantara lehibe ny tanànan'i Sozopol. Ao amin'ny nosy akaiky atao hoe St. Ivan, ekipana mpikaroka, notarihan'ny profesora Kazimir Popkonstantinov, no nahita ny sisan'ny masindahy Joany Batista ! Taorian'ny fihadiana ny nosy, nify iray sy sombina felan-tanana ary valanorano no hita tao anaty boaty vita amin'ny vato, nohidina tamin'ny fotaka mena. Ireto sisan'ny masindahy ireto dia hita niaraka tamin'ny alitaran'ny monastera iray izay efa nisy nandritra ny taonjato 12 ary nilaozan'ireo moanina tamin'ny taona 1620. Ny fampahalalam-baovao amin'ny ankapobeny toy ny CNN sy ny National Geographie dia mitady hanao sarimihetsika mikasika ity zavatra vao hita ity.
Rumi Borisova manoratra [BG]:
Efa andro maromaro izao dia rakotry ny fanehoan-kevitra mikasika ny fanambarana nataon'ilay ministra , Bojidar Dimitrov, tsy manana ministera ka nampisahanina ny Filankevitry ny Minisitra Boligara any ivelany sy ny Departemantan'ny Raharaham-pivavahana ny firesahana tao amin'ny aterineto. Nampiasa teny tsy mendrika ny averina eto ity minisitra ity raha nikabary. Niseho izany rehetra izany nandritra ny resaka natao tamin'ny mpanao gazety iray, izay nilaza tena ho mpahay tantara ary manana mari-pahaizana ambony amin'izany taranja izany, no nanomezany fanazavana mikasika ny sisan-taolan'ny masindahy Joany Batista, hita nandritra ny fisavana ny toerana masina iray hatramin'ny nanombohan'ny vanim-potoana kristiana.
Ny bilaogy Neverojatno namoaka izao fanehoan-kevitra izao [BG]:
Nanomboka nisy ny fahagagana tao amin'ny firenentsika taorian'iny zavatra hita momba ny masindahy Joany Batista iny. Olona aman'arivony maro no nitsahatra tsy nandoa ny tambin-karama fiantohana aretina intsony ary nitombo be ny isan'ny tsy voantoka ka efa nahatratra 1,7 tapitrisa izany. Manomboka mino ny herin'ny masindahy ireo tsy mpino ary nahatsapa fa ny vintana mety hahavelomana dia betsaka raha mivavaka manoloana ny taolana taolana be noho ny mino ny siansa na ireo dokotera boligara. Mahatsapa ireto boligara ireto fa ny finoana ny ao ambony dia tsy mitaky volabe, vavaka fotsiny, kanefa ny finoana ny mpanao politika dia vidiana lafo amin'ny hetra ho takalon'ny fampanantenana marobe izay tsy misy tanteraka matetika.
Fanehoan-kevitra mahaliana sady tena mitsikera no nivoaka tao amin'ny bilaogy Blogmasa [BG]:
Amin'ny hevitra tahaka itony dia tsy diso ny filazana fa Andriamatoa minisitra dia minisitra “mivaha”. Nirarak'ompana ny tenim-pahateerana nihatra taminy tahaka ny tadio taorian'ny hafatra nataony izay diso ny fandraisana azy. Mazava ho azy, fa ny “olona mivaha” dia tsy hahatakatra mihitsy ny hafatra nataony izay manana fijery miabo ka nifotitra taminy ihany. Araka ny efa nazavaina, ity “minisitra mivaha” ity dia nanao izay azony natao rehetra hahatonga ny “olona mivaha” hirehareha amin'ny fananan'izy ireo ny “anisan'i” masindahy Joany Batista ary hampitombo ny mpizahan-tany mandritra ny vanim-potoan'ny fizahan-tany any amin'ny Ranomasina Mainty.
Dimiter Atanassov maneho hevitra tsy mitovy amin'izay ao amin'ny bilaoginy[BG]:
Miatrika fotoam-pahavaratra mafana vaovao isika ho an'ny arkeolojia boligara ! – Izao no feo amin'ny ankapobeny, tsy misy firaharahiana sady maharikoriko, zava-mahazatra ny gazety, novolavolaina hanaovana fanaitairana mora vidy. Sady sakafon'ny mpanankarena ny fanaitairana lafobe ary tsy takatry ny ankamaroan'ny olona. Tsy miavaka ny fahafantarana raha tena an'ny masindahy Joany Batista tokoa ireto sisan-taolana ireto, na an'i Joany hafa nonina tany amin'ny sisindranomasin'ny Ranomasina Mainty, dia mbola fanontaniana tsy maharesy lahatra na dia eo aza ny fanajany ny nentin-drazana, na tsia. Ho an'ny olona tahaka izany, ny fenekena na ny fandavana ny sakramenta dia tsy misy antony satria vahiny amin'izany izy – safidy tsy dia mitombina loatra. Izany no mahatonga ny hoe ny tena voakasika marina amin'ity resaka momba ny sisan-taolan'ny masindahy ity dia ny mpino. Ireo izay manolotra ny fiainany amin'ny maha laika azy amin'ny fiangonana fa tsy amin'ny politika.